ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို သီချင်းလေးနဲ့ အကုန်လှစ်ဟပြလိုက်တဲ့ ပုရိသတို့ရဲ့ အသဲကျော် သင်ဇာရဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း videoလေး – Online News Post
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို သီချင်းလေးနဲ့ အကုန်လှစ်ဟပြလိုက်တဲ့ ပုရိသတို့ရဲ့ အသဲကျော် သင်ဇာရဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း videoလေး
အခု တခါမှာ လည်း ဆက်ဆီ ကျကျ လှပ နေတဲ့ နိုင်ငံ ကျော် မင်းသမီး မမသင်ဇာ က တော့ ပုရိသ တွေကို ရင်ခုန်သံ မြန်သွား စေမယ့် ဗီဒီယိုဖိုင် လေး ကို သူမ ရဲ့ ဆို ရှယ် အကောင့် က နေ တင် လိုက် ပါ တယ်.. ။ ဗီဒီယို ဖိုင်လေး ကိုတော့ အောက် ဆုံး တွင် ဖော်ပြ ပေးထားပါ တယ် နော်… . ဒီ ဗီဒီယို ဖိုင်လေး ကို ကြည့် ပြီး မှတ် ချက် လေး တွေ ပေးသွား ကြ ပါ အုံး နော် … .
ညို့အား ပြင်တဲ့ အကြည့် တွေ နဲ့ အတူ ခပ်လန်းလန်း ပုံတွေ ကြောင့် ပုရိသ တွေ ကို ရင်ခုန်သံ မြန် အောင် လုပ်နေ လေ့ရှိတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်က တော့ ပုရိသ တွေ အကြိုက် ဆယ် လီ တစ် ဦး ပါ ပဲ … . ။ သူမရဲ့ ကောက်ကြောင်း တွေ ကို အမြဲတမ်း လိုလို ချပြ လေ့ ရှိ ပြီး ရင်ခုန်သံ တွေ မြန်အောင် လည်း အမြဲ ပုံတင် လေ့ရှိ တဲ့ ဆယ်လီ မမ ပါ … .
မမ သင်ဇာက တော့ ပုရိသ တွေ ကိုရင်ခုန်သံ မြန်သွား စေမယ့် ဗီဒီယိုဖိုင် လေးကို သူမ ရဲ့ ဆိုရှယ်အကောင့် ကနေ တင် လိုက် ပါ တယ်..။ ညို့အား ပြင်းတဲ့ အကြည့်တွေ နဲ့ အ တူ ခပ် လန်းလန်း ပုံတွေကြောင့် ပုရိသ တွေ ကို ရင်ခုန်သံ မြန် အောင် လုပ်နေ လေ့ရှိတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် က တော့ ပုရိသ တွေ အကြိုက် ဆယ်လီ တစ်ဦး ပါ ပဲ … .
crd : Thin Zar Wint Kyaw fb
အခု တခါမွာ လည္း ဆက္ဆီ က်က် လွပ ေနတဲ့ နိုင္ငံ ေက်ာ္ မင္းသမီး မမသင္ဇာ က ေတာ့ ပုရိသ ေတြကို ရင္ခုန္သံ ျမန္သြား ေစမယ့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ ေလး ကို သူမ ရဲ့ ဆို ရွယ္ အေကာင့္ က ေန တင္ လိုက္ ပါ တယ္.. ။ ဗီဒီယို ဖိုင္ေလး ကိုေတာ့ ေအာက္ ဆုံး တြင္ ေဖာ္ၿပ ေပးထားပါ တယ္ ေနာ္… . ဒီ ဗီဒီယို ဖိုင္ေလး ကို ၾကည့္ ၿပီး မွတ္ ခ်က္ ေလး ေတြ ေပးသြား ၾက ပါ အုံး ေနာ္ … .
ညိဳ႕အား ျပင္တဲ့ အၾကည့္ ေတြ နဲ႔ အတူ ခပ္လန္းလန္း ပုံေတြ ေၾကာင့္ ပုရိသ ေတြ ကို ရင္ခုန္သံ ျမန္ ေအာင္ လုပ္ေန ေလ့ရွိတဲ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္က ေတာ့ ပုရိသ ေတြ အႀကိဳက္ ဆယ္ လီ တစ္ ဦး ပါ ပဲ … . ။ သူမရဲ့ ေကာက္ေၾကာင္း ေတြ ကို အျမဲတမ္း လိုလို ခ်ၿပ ေလ့ ရွိ ၿပီး ရင္ခုန္သံ ေတြ ျမန္ေအာင္ လည္း အျမဲ ပုံတင္ ေလ့ရွိ တဲ့ ဆယ္လီ မမ ပါ … .
မမ သင္ဇာက ေတာ့ ပုရိသ ေတြ ကိုရင္ခုန္သံ ျမန္သြား ေစမယ့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ ေလးကို သူမ ရဲ့ ဆိုရွယ္အေကာင့္ ကေန တင္ လိုက္ ပါ တယ္..။ ညိဳ႕အား ျပင္းတဲ့ အၾကည့္ေတြ နဲ႔ အ တူ ခပ္ လန္းလန္း ပုံေတြေၾကာင့္ ပုရိသ ေတြ ကို ရင္ခုန္သံ ျမန္ ေအာင္ လုပ္ေန ေလ့ရွိတဲ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ က ေတာ့ ပုရိသ ေတြ အႀကိဳက္ ဆယ္လီ တစ္ဦး ပါ ပဲ … .
Previous post ရေကူးကန်ထဲက တစ်ကိုယ်လုံးအလှလေးတွေပေါ်အောင် ရေကူးနေတဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ ရင်ခုန်စရာ ဗီဒီယိုဖိုင်
Next post ရန်ကုန် – မန္တလေး အမြန်လမ်းပေါ်တွင် သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ထွန်းထွန်း ကားအက်ဆီးဒန့်ဖြစ်